जब मन्त्रीहरु नागरिकको गुनासो सुन्न गाउँ पसे...
Tue, Nov 30, 2021 | 14:53:26 NST
Posted: Tuesday, Feb 27, 2018 08:10 AM (4years ago )
सुर्खेत, फागुन १५ – सुर्खेतको पश्चिम बराहताल गाउँपालिका–५, बड्डीचौरमा साेमबार बिहान ७ बजेदेखि केही स्थानीयबासिन्दाहरु एकै ठाउँमा थिए । ‘आज मन्त्री ज्यूहरु आउँदैहुनुहन्छ’, स्थानीय बासिन्दाहरु भन्दै थिए, ‘हामीले उहाँहरुसँग विकास माग्ने हो ।’
त्यसैको केही समयपछि झण्डा फरफराउँदै २ गाडी आए । त्यसमा सवार थिए उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसी । मन्त्री बुढा र केसी बराहताल गाउँपालिकामा रहेको जनज्योति माविले कृषिमा गरेका काम र पर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्न गएका थिए ।
मन्त्री बुढा र केसी मन्त्रीको सपथ लिएको आठ दिन पछि पहिलो पटक अध्ययन र अवलोकन भ्रमणका लागि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट गाउँ पुगेका हुन् । मन्त्रीहरु गाडीबाट ओर्लिने बित्तिकै स्थानीयहरुले फूलमाला र टिका लगाएर स्वागत गरे ।
एकछिन पनि आराम गर्न नपाउँदै जन ज्योति माध्यमिक विद्यालय बड्डीचौरका प्राचार्यले मन्त्रीहरुलाई अवलोकनमा जान अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले सुरुमा विद्यालयले सञ्चालन गरेको बाख्रा फर्ममा लिएर जानुभयो । बाख्रा फर्मको मन्त्रीले अवलोकन गर्दै गर्दा विद्यालयका प्राचार्य नारायण सिग्देलले भन्नभयो, ‘हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई यही पढाएपछि काम गर्ने वातावरण बनाउन थालेका छौँ । बेलायतमा जस्तै विद्यार्थी पढ्न र काम पनि गर्न पाइन्छ भनेर यहाँ आउने वातावरण सृजना गर्छौ। यसमा तपाईंहरुको सहयोगको आवश्यक छ ।’
त्यसलगत्तै मन्त्रीहरु विद्यार्थीहरुले काम गरिरहेको ठाउँमा पुगे । बारीमा फर्सी लगाउनको लागि दोलखाका सुमन बिसी र सिन्धुपाल्चोकमा श्याम तामाङ खाल्डल खनिरहेका थिए । उनीहरुले भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीसँग कुरा राखे ।
‘प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश गराउने भनेर निर्णय गरेको सुन्दा खुशी लाग्यो’ उनीहरुले भने, ‘हामीले पनि कृषि विषय पढेको र यही क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले केही सहयोग पुग्छ भन्ने आशा गरेका छौँ ।’
त्यसलगत्तै मन्त्रीहरु प्राविधिक शिक्षा पढिरहेका विद्यार्थीहरुको होस्टेलमा गए । त्यहाँ पुग्दा विद्यार्थीको खाना खाने समय भएको थियो । मन्त्रीहरुलाई देख्ने वित्तिकै प्राविधिक शिक्षा पढिरहेका अविन तमाङले भने, ‘हामी कृषिमा केही गर्न चाहान्छाै‌ं । हामीसँग पढेर नलेज छ तर पूँजीको आवश्यक छ । तपाईँहरुले हामीलाई बेरोजगार नरहने गरी योजना ल्याउनुपर्‍यो ।’
विद्यार्थीहरुको कुरा सुनिसके पछि भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले विद्यार्थीहरुलाई आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, ‘चिन्ता नलिनु ! हामी कृषिमा प्राथमिकता दिने योजना ल्याउँछौँ । यसै विषयमा नै अध्ययन र अवलोकन गर्न आएका हौँ । तपाईँहरु राम्रोसँग पढ्नुहोस काम गर्नुहोस । यस अघिसम्म ठूलाले मात्र कृषिमा छुट्टाएको बजेट पाउने गर्थे अबदेखि हामी त्यसको अन्त्य गरेर खास कृषकहरुलाई राहत हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’
मन्त्रीहरुको टोली त्यसपछि बड्डीचौरमै रहेको ‘बोधि ज्ञान तपो भूमि’ वुद्ध बिहारमा पुग्यो । बिहारमा पुगेका मन्त्रीहरुलाई बिहारका अध्यक्ष जगतबहादुर मस्याङ्गीले पर्यटकहरु धेरै अवलोकन गर्न आउने र भिक्षुहरु पनि धेरै आउने भएकाले हलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिहारका लागि केही सहयोग गरदिन उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाउनुभयो । सुर्खेतको पश्चिम बावियाचौर र कर्णाली जाने नाका परेकाले पर्यटकहरु अवलोकन गर्न आउने र एउटा हलको आवश्यक परेको पर्यटन पर्वद्धनका लागि मन्त्रीले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसपछि दुई मन्त्रीको टोली चाउमिन उद्योगतर्फ लाग्यो । स्थानीय शेरबहादुर सारु मगरले सञ्चालन गरेको चाउमिन उद्योगमा मन्त्रीहरु पुग्दा मगर चाउमिन बनाउँदैहुनुहुन्थ्यो । ‘कसरी उद्योग सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? चाउमिन उद्योग पुगेका मन्त्रीले मगरलाई प्रश्न गर्नुभयो । ‘अहिले एउटा संस्थाको सहयोगमा सानो उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छु । आम्दानी ठिकैछ’, मगरले भन्नुभयो, ‘यस्ता साना उद्योगहरुलाई अब हजुरले सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’ मगरलाई पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर मन्त्रीहरु जनज्योति मावितर्फ लाग्नुभयो ।
जनज्योति माविमा अध्ययनरत कृषि र पशु भेटनेरी जेटिए पढिरहेका विद्यार्थीहरुले गरेको तरकारी खेती र पशु चौपाय तथा कुखुरापालन देखाउन प्राचार्य सिग्देलले बाँझो जग्गाबाट मन्त्रीहरुलाई लग्नुभयो ।
‘सिँचाइको अभावमा यी जग्गा अहिले बाँझो छन् । सोत्तखोला सिंचाई आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन् । यदि पैसा छ भने छिटै खर्च गरेर बनाउनुपर्‍यो’, सिग्देलले भन्नुभयो, ‘यी बाँझा रहेका खेतहरुमा हामी अन्नबाली उब्जाउछौँ र तपाईँहरुलाई हामी अर्गानिक उत्पादन उपलब्ध गराउँछौँ ।’
प्राचार्य सिग्देलले आफ्ना विद्यार्थीहरुले स्थानीयहरुसँग भाडामा जग्गा लिएर र विद्यालयले नै थोरै पैसा ऋण दिएर तरकारी खेती गरेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीहरुसँग युवाहरुलाई कृषिमा रोजगारीका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने माग राख्नुभयो । विद्यार्थीहरुले गरिरहको तरकारी खेती र माछापालनका लागि ३२ वटा धारा निर्माण गरिदिन मन्त्रीहरु समक्ष सिग्देलले माग राख्नुभयो ।
‘अहिले विद्यालय र केही संस्थाको सहयोगमा जमिनबाट एकसय ३७ मिटर जमिन खनेर १–२ वटा धारा निकालेका छाैं । यहाँ बत्ति छैन् । सोलारले पानी तानेका छाँै’ सिग्देलले मन्त्रीहरुसँग भन्नुभयो, ‘तपाईँहरुले कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने हो भने हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई १० विद्यार्थी बराबर १ धाराकाले दरले ३२ वटा यस्ता धारा निर्माण गरिदिनु ।’
प्रचार्य सिग्देलले यदि प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने हो भने विद्यार्थीहरुलाई गाई, गोबर ग्यास र सोलार दिन आग्रह गर्नुभयो । त्यससँगै मन्त्रीहरुको टोलीले जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको अवलोकन ग¥यो । प्रशोधन केन्द्रलाई वृहत गराउन अब सरकारले केही सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष जगतबहादुर मस्याङ्गीले माग राख्नुभयो ।
त्यसैक्रममा विद्यार्थीले सञ्चालन गरिरहेको कुखुरापालन, खरायो पालन, माछापालन, तरकारी खेतीको अवलोकन गर्दै मन्त्रीहरु फेरि विद्यालयमा पुगे । मन्त्रीहरुको विद्यालयमा आगमन हुँदा विद्यार्थीहरु लाइनमा थिए । उनीहरुले फूलमाला र ताली बजाएर स्वागत गरे ।
मन्त्रीहरुले विद्यालय भित्र रहेका सबै संरचनाहरुको अवलोकन गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मन्त्रीहरुलाई विद्यालयको तर्फबाट अहिलेसम्म गरेका कामहरु र विद्यालयले कृषि र पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर विद्यार्थीहरुलाई पढाएकोले केही सहयोग गरिदिनका लागि पनि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले पनि विद्यार्थीलाई आश्वासन दिन सुरु गर्नुभयो । ‘कृषि विषज्ञसँग छलफल चलाइरहेको छु । विद्यालयले कृषिका क्षेत्रमा राम्रो गरेको छ भन्ने सुनेर अवलोकन गर्न आएको हुँ’, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, ‘अझै पनि धेरै गर्न बाँकी छ त्यसैको लागि हामी अवलोकन गर्न आएका हाैं । हामी अभाव भएका कुराहरु पूरा गछौँ । क्याविनेटमा उठाएँछौँ । तपाईँहरुलाई उत्साह थप्छौं । तपाईँहरु ढुक्क हुनुहोस । हामी हाम्रै ठाउँमा केही गरेर खाने व्यवस्था ल्याउँदैछाैं ।’
यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले उद्योग पर्यटन र वनको हिसाबले धेरै सम्भावना रहेको भन्दै यसलाई व्यवसायिक रुपमा बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्नको लागि नै अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा आएको बताउनुभयो ।
विद्यालयको अवलोकन गरिसकेपछि मन्त्रीहरुको टोली बड्चौरमा रहेको कालिका मन्दिर र सून्दरी तालको अवलोकन गर्न गए । आधा बाटोसम्म गाडीमा गएका मन्त्रीहरु बाटो नबनिसकेकाले केही बेर हिँडेर मन्दिर र तालम पुगेर अवलोकन गरे । बड्चौरका स्थानीय ताराकेशर गौतमले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई मन्दिर र तालको पर्वद्धन र संरक्षणको लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
‘हामीले यही ठाउँलाई हेर्न लायक ठाउँ बनाउन सक्छाैं’, गौतमले भन्नुभयो, ‘यसका लागि सबै भन्दा पहिले मन्दिर र तालसम्म आइपुग्न सडकको आवश्यक छ अनि मन्दिर र तालको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ ? छिटो गर्नुपर्‍याे । ’
मन्त्रीहरु बिहानैदेखि अवलोकन भ्रमणमा निस्केका थिए । करिब साढे ११ बजे मन्त्रीहरुको टोली बड्डीचौरमा रहेको सालघारी होमस्टेमा पुग्यो । त्यहाँका स्थानीयहरु मन्त्रीहरुको टोलीलाई स्वागत गर्न तयार भएर बसेका थिए । मन्त्रीहरुले त्यहाँ पनि फूलमाला र अविरसहितको स्वागत पाए ।
‘हामी नै मन्त्रालयमा मन्त्री ज्यूहरुसँग भेट्न जाउँला भन्ने सोचका थियौँ । आज हाम्रै दैलोमा आइपुग्नुभयो’, होमस्टे सञ्चालक समितिका सल्लाहकार धीमराज जोलमीले भन्नुभयो, ‘हामीले गाउँमा १६ घर मिलेर अहिले होमस्टे सञ्चालन गरेका छौँ । रारा जाने पर्यटकलाई एक दिन भएपनि यहाँ बसाल्ने उद्देश्यले होमस्टे स्थापना गरेका हौँ । यहाँ पानीको समस्या छ । पानी भयो भने हामी यहाँ अर्गानिक अन्नबाली उत्पादन गर्न सक्छौँ र सडक र सिँचाइको पनि आवश्यक छ, हजुरहरुले यसका लागि केही गरिदिनुपर्‍यो ।’
मन्त्रीहरुले त्यहाँका नागरिकको माग मात्र सुनेनन् खाना पनि त्यही खानुभयो । खाना खाएपछि भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले अबदेखि सबै मन्त्रालयका मन्त्री, कर्मचारीले यहाँबाट उत्पादन अर्गानिक उत्पादन किन्ने हआश्वासन दिनुभयो ।
‘आज हामीले अर्गानिक उत्पादनको खाना खान पायौँ । यसको पर्वद्धनका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँछौँ’, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरुका लागि ठूलै योजना ल्याउछौँ ।’
स्थानीयले कन्त्री केसीलाई आफूहरुको स्थायी लालपुर्जा नहुँदा बैंकमा पूर्जा राखेर ऋण लिन समेत नसकेको गुनासो राख्दै लालपूर्जा उपलब्ध गराउन माग गरे ।
अवलोकन टोलीमा सांसद कृष्णा शाह, मन्त्रालयका सचिवलगायतको समेत सहभागिता रहेकाे थियो । मन्त्रीहरुसहितको भ्रमण टोली त्यसपछि त्यहाँबाट बिदा भएर हिड्याे । तर उनीहरुले बाँडेका सपना पूरा हुन्छन वा हुँदैनन त्‍यो भने भोलिका दिनमा देखिन्छ नै । नागरिकले भने मन्त्रीहरुले आफ्ना माग पूरा गर्नेछन् भन्ने आशा राखेका छन् । त्यो आशालाई निराशामा बदल्ने काम मन्त्रीहरुबाट नभएकै राम्रो हुनेछ ।